"दुई महिना भित्रमा अन्लाईन आउँछ भन्ने कुरामा हाम्रो संघ ढुक्क छ": राजु पौडेल - Lagani News
Home Interview "दुई महिना भित्रमा अन्लाईन आउँछ भन्ने कुरामा हाम्रो संघ ढुक्क छ": राजु पौडेल
"दुई महिना भित्रमा अन्लाईन आउँछ भन्ने कुरामा हाम्रो संघ ढुक्क छ": राजु पौडेल
Published: Thursday, August 2, 2018 2018-08-02T13:12:00-07:00
Santosh Raj Bajgain August 02, 2018 Interview,
लगानीन्युज/काठमाडौँ: श्रावणको पहिलो साता जन्मिएको नेपाल पूंजीबजार लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष राजु पौडेल पेशाले शिक्षक हुन् । केही समय यता लेख रचनाबाट शेयर शिक्षा फैलाउदै आएका पौडेल अब भने नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघमा आवद्ध भएर पुँजी बजारको विकास गर्न लागिपरेका छन् । उपाध्यक्ष राजु पौडेलसंग लगानीन्युज टिमले गरेको कुराकानी :
सर्वप्रथम नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता सङ्घको उपाध्यक्ष हुनु भएकोमा बधाई ! तपाइहरू दुईवटा संघपछी खुलेको तेस्रो सङ्घ, अरू भन्दा कसरी फरक हुनुहुन्छ ?
हाम्रो संघ अरू संघ भन्दा यस मानेमा फरक छ । पहिलो कुरा नेपालको पुँजी बजारको इतिहासमा लगानी कर्तासंघको अध्यक्षमा पहिलो युवा महिला अध्यक्ष हाम्रो संघले पाएको छ । दोस्रो कुरा अरू संघ काठमाडौँमा मात्र सीमित छन् हामी सातै प्रदेश ७७ जिल्लामा पुग्ने पहिलो संघ बन्दै छौ र तेस्रो अरू संघ ठुला लगानी कर्ताहरूलाई नेतृत्व गर्छन् भने हामी साना देखि ठुला लगानी कर्ता अर्थात् १५ लाख लगानी कर्ताको नेतृत्व गर्छौ ।
अरू संघ ठुला लगानी कर्ताहरूलाई नेतृत्व गर्छन् भने हामी साना देखि ठुला लगानी कर्ता अर्थात् १५ लाख लगानी कर्ताको नेतृत्व गर्छौ ।
भविष्यमा के के गर्ने योजना छ ? बुदागत रूपमा भन्दिनुस् न ?
सातै प्रदेशका संयोजक र स-संयोजक बनाउने
सबै जिल्लाबाट सदस्य बनाउने
यो आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा शेयर शिक्षा कार्यक्रम लाने
आगामी वर्षहरूमा नेप्से र सेबोनसँग समन्वय गरेर जिल्ला जिल्लामा शेयर शिक्षा र लगानीकर्ता awareness कार्यक्रम लिएर जाने
त्यस बाहेक सेबोन, नेप्से र cds लाई बार बार डेलिकेशन गएर झक्झकाई रहेन ।
उच्च तहका नेता देखि लिएर अर्थमन्त्री सम्म लाई भेटेर सेयर बजार को विकासको लागि कुरा राख्ने
छिट्टै रिपोर्टस क्लबमा एउटा सेयर बजारको विकासमा नेप्से र सेबोन को भूमिका भन्ने विषयमा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने योजनामा छौ ।
लगानीकर्ताका संघहरूले नेताका गएर फोटो खिच्ने काम मात्र गर्छन् भन्ने आरोप लाग्छ, यसमा के भन्नु हुन्छ ?
कसले के भन्छ भन्दा पनि नेता भेटेर के कुरा राखियो के फाइदा भयो भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यो देशका निति नियम बनाउने देश हाक्ने नेताकोमा नगएर कहाँ जानू पर्छ त? अनि फोटो खिचेर मिडियामा न दिए कसरी लगानीकर्तालाई जानकारी हुन्छ त सङ्घहरूले के काम गर्दै छन् भनेर ।
देश भर तपाईँहरूको उपस्थिति देख्न पाइन्छ ?
मैले माथि नी भनिसके हामी छिट्टै सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा पुग्दै छौ। त्यस कारण तपाईँ ढुक्क हुनु होस यो सङ्घ को उपस्थित देशभरी हुनेछ ।
संघमा कोही आबद्ध हुन के गर्नु पर्छ ? आबद्ध भएबापत लगानीकर्ताले के के फाइदा लिन सक्छन् ?
संघमा आबद्ध हुनलाई हामीले सदस्यता आव्हान गरिसकेका छौ । अहिले सातै प्रदेशका सक्रिय लगानी कर्तासाथिहरु हाम्रो सम्पर्कमा आईसक्नु भएको छ । हाम्रो सङ्घमा सदस्य हुन हामीले एउटा फारम उपलब्ध गराएका छौ त्यो फारम भर्ने र प्रवेश शुल्क रु ५०० तिर्ने र त्यस पछि उहाँ हाम्रो सङ्घको सदस्य बन्नु हुन्छ । उपत्यका भित्र हामीलाई भेटेर वा हाम्रो Nica को खातामा रु ५०० जम्मा गरेर भौचर हामीलाई स्कानिङ गरेर पठाए पछि देश विदेश जहाँ बाट पनि हाम्रो सङ्घको सदस्य बन्न सक्नु हुनेछ ।
यो सङ्घमा आबद्ध भए बापत प्रदेश र जिल्ला का साथीहरूले यही सङ्घको ब्यानरमा आ-आफ्नो स्थानमा कुनै पनि सेयर सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न पाउनुहुन्छ ।
विभिन्न सेयर सचेतना कार्यक्रममा भाग लिन पाउने सेयर शिक्षा पाउने
धेरै लगानी कर्ता साथीहरू सङ्घ एउटा network बनाउन पाउने मौका मिल्नेछ ।
सेयरमा लगानी गर्दा हल्ला र साथीको लहड भन्दा पनि आफै बुझेर लगानी गर्न सक्ने हैसियत बनाउने अवसर हुनेछ ।
अहिलेको बजारलाई कसरी हेर्नु पर्छ ?
अहिलेको बजारलाई बुलिस पछिको वियरिस अवस्थाको बजार हो भनेर हेरेको छु मैले । अब छिट्टै बजारले अर्को बुलिसको यात्रा तय गर्ने छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु । अहिले बजार घट्नुको दोष धेरैले अर्थमन्त्रीलाई दिएको पाइएको छ तर म त्यो कुरामा विश्वास गर्दिन । अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को अर्थमन्त्री आए पनि एक दुई दिन बजार बढ्ला त्यस पछि फेरि पनि यस्तै ल्याङ ल्याङ नि हो भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले बजार घटाईको प्रमुख दुई कारण हुन सेयर आपूर्ति अत्याधिक हुनु र सेयर कर्जाको ब्याजदर उच्च हुनु हो । अब ब्याजदर घट्ने क्रम सुरु भएको छ । कम्पनीहरूले पनि चुक्ता पुँजी लगभग पुराई सकेकोले शेयरको आपूर्तिपनि रोकिने छ अनि बजारले बुलिसको यात्रा सुरु गर्ने छ ।
अब ब्याजदर घट्ने क्रम सुरु भएको छ । कम्पनीहरूले पनि चुक्ता पुँजी लगभग पुराई सकेकोले सेयर को आपूर्ति पनि रोकिने छ अनि बजारले बुलिसको यात्रा सुरु गर्ने छ ।
तापाईहरु नेप्सेसंग नजिक हुनुहुन्छ र आम लगानीकर्ता भन्दा सङ्घको पहुँच पनि धेरै छ। कहिले सम्म आउला त अन्लाईन ?
हिजो मात्र हामी अन्लाईन ट्रेडिङको बारेमा के के हुँदै छ भनेर जानकारी लिन नेप्से प्रमुखलाई भेट्न गएका थिएम । साउद र नेप्सेका टेक्निसियन नायकको भनाई अनुसार "अब हामी छिट्टै अहिलेको अन्लाईन ट्रेडिङ परीक्षणमा लगानीकर्ताले आफै अडर दिन सक्ने विशेषता थप्दै छौ र अब दुई महिना भित्रमा हामी पूर्ण अन्लाईन लगानीकर्तालाई दिन सक्छौ" । नेप्सेको प्रमुखको फेरबदलको कारण केही दिन काम ढिला हुन गएको कुरा उहाँहरूले हामी सँगको भेटमा भन्नू भएको छ । त्यस कारण उहाँहरूको कुरा सुनी सके पछि अब को दुई महिना भित्रमा अन्लाईन आउँछ भन्ने कुरामा हाम्रो सङ्घ ढुक्क छ ।
बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरामा तपाईँको भनाई के छ ?
हाम्रो धेरै अघि देखिको एउटा प्रमुख माग बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्छ भन्ने थियो जुन माग अहिलेको मौद्रिक नीतिले पूरा गरी दिएको छ । तर अब पनि बैङ्कले ब्रोकर लाइसेन्स पाउलान् र मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्लाका जनतासम्म शेयर बजार पुग्ला भन्ने कुरामा ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन । समय समयमा नियामक निकायलाई यस बारेमा झकझकाई राख्नु पर्दछ । बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स र अन्लाईन ट्रेडिङ सुरु गरेर काठमाडौँको चक्रपथ भित्र मात्र सीमित नेपालको सेयर बजारलाई नेपाल अधिराज्यभरी र विश्वव्यापी रूपमा पुराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहँदै आएको छ जुन माग अब छिट्टै पूरा हुँदै छन् । बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा एउटा कुरामा भने विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । हाम्रो बजार को लगभग ८३% हिस्सा वित्तीय क्षेत्रले ओगटेको अवस्थामा बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा झन् बढी इनसाइडर ट्रेडिङ हुने बोकि भन्ने अंशकापनि छ । यो आशाका मेटाउन बैङ्क को सहायक कम्पनीलाई कडा कानुन बनाएर मात्र ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने मेरो भनाई छ ।
बैङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स र अन्लाईन ट्रेडिङ सुरु गरेर काठमाडौँको चक्रपथ भित्र मात्र सीमित नेपालको सेयर बजारलाई नेपाल अधिराज्य भरी र विश्वव्यापी रूपमा पुराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहँदै आएको छ जुन माग अब छिट्टै पूरा हुँदै छन् ।
. बजार विकास गर्न के के गर्नु पर्ला ?
बजार विकासको लागि निम्न लिखित काम नियामक निकाय देखि सरकार को पहलमा हुनु पर्दछ :
अन्लाईन ट्रेडिङ तुरुन्तै आउनु पर्दछ
नियम कानुन बनाएर बैङ्क लाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने काम को सुरुवात छिटो गर्नु पर्दछ ।
बजार निर्माता को तुरुन्तै व्यवस्था गर्नु पर्छ
एन आर एन लाई नेपाल को पुँजी बजार छिटो भन्दा छिटो खुला गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ।
ब्रोकर कम्पनीका शाखा बिस्तार गर्नु पर्दछ।
अहिको नेप्सेमा निजीकरण गर्नु पर्छ वा नयाँ स्टक एक्सेञ्ज ल्याउनु पर्छ।
पुँजी बजारको विकासको लागि सरकारले पाँच बर्षे योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
शेयर सचेतना वृद्धि गर्ने काम व्यापक गर्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा के भन्नू चाहन्छु भने आउनु होस हाम्रो संघमा आबद्ध भएर हातेमालो गर्दै नेपालको पुँजी बजारको विकासको लागि केही गरौँ । साथै सेयरमा लगानी गर्दा हल्लाको भरमा भन्दा पनि बजार र कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बारेमा आफै बुझेर लगानी गर्नुहोस् भन्ने सुझाव १५ लाख लगानीकर्ताहरूलाई दिन चाहन्छु । धन्यवाद
By Santosh Raj Bajgain - August 02, 2018